Laptọọpụ nwere i7 processor: ndị nwere uru kacha mma maka ego
Ọ bụ ezie na anyị anọwo, na tiori, na post-PC oge maka afọ ugbu a, ahịa kọmputa na-adịgide adịgide. N'ezie, ha mụbara n'oge ọrịa na-efe efe na njide, nke nwere ihe doro anya: ịrụ ọrụ, anyị na-anọgide na-ahọrọ kọmputa, na ọtụtụ oge anyị na-ahọrọ laptọọpụ maka njem ha na nkasi obi ha. N'ime ndị na-ere ahịa kacha mma, anyị nwere ndị na-eji Windows, karịsịa ndị na-eji Intel i5 ma ọ bụ i7 processors.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-atụle ịzụ a i7 laptọọpụ, ma ọ bụ anyị ga-enyere gị aka ịchọpụta ma ọ bara uru maka ojiji ị ga-enye akụrụngwa.
1 Laptọọpụ i7 kacha mma
2 Ụdị laptọọpụ i7 kacha mma
3 Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i7?
4 I7 ma ọ bụ i9?
5 Laptọọpụ I7 nwere 16GB nke RAM na SSD, nhazi ọkacha mmasị
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i7 dị ọnụ ala
7 Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i7 dị ọnụ ala?
Laptọọpụ i7 kacha mma
ASUS TUF Dash F15 ...
Ụdị laptọọpụ i7 kacha mma
Lenovo bụ mba China nke nwere ọtụtụ mba na-etolite ma na-ere ngwaahịa eletrọnịkị. Ndepụta nke ihe ọ na-emepụta adịghị agwụ agwụ, ma anyị nwere ike ịkpọ mobiles, mbadamba nkume, ndị na-ebi akwụkwọ, sava na, ma ọ bụ na ọ gaghị adị na ndepụta a, kọmputa. A mụrụ ha na mmalite 80, na kemgbe ahụ, ha bilitere ma bilie ghọọ otu n'ime ndị na-emepụta ihe kachasị mkpa na mbara ala.
N'ime katalọgụ ya, anyị na-ahụ ụdị kọmputa dị iche iche, nke n'ọnọdụ ya nwere ike ịkpata mgbagwoju anya n'ihi na ọ na-erekwa ngwá ọrụ dị ọnụ ala nke na-adịghị mma. Mana ha na-eme nke a iji kpuchie ohere niile, n'ihi na ha bụkwa a akara akara n'etiti ndị kacha mma, na akụrụngwa ha, dị ka ThinkPads, IdeaPads na ndị e bu n'obi maka egwuregwu, bụ ezigbo ihe akaebe nke a.
HP bụ ụlọ ọrụ California nke pụtara mgbe Hewlett-Packard kewara. Ọ bụrụ maka ihe ọ bụ ndu bụ maka ndị na-ebi akwụkwọ ya, kamakwa maka kọmputa ha. Ọ dị mma ịkọ na ọ bụ ebe akụkụ nke Apple si bịa, ebe ọ bụ na Wozniak malitere ịrụ ọrụ maka ha na ọbụna jụ echiche ya nke ịmepụta kọmputa nkeonwe, ya bụ, na ọ bụghị ya na ụlọ ọrụ ahụ, ma site na ya. ndị ọrụ na maka ọrụ ọ bụla.
Laptọọpụ HP 470 G8 -...
Maka kọmpụta, ọ bụ ya otu n'ime ụdị kachasị mkpa n'ụwa niile, na na katalọgụ ya anyị nwere ike ịhụ ihe niile na ihe niile dị mma. Ọ bụghị ihe a na-ekwu mgbe niile, ebe ọ bụ na mgbe ha tiwara, ha mere mmegharị ahụ dị iche iche, dị ka ịmalite otu ndị nwere obere atụmatụ dị mma nke natara nyocha ọjọọ. Ma ha maara otú e si emeghachi onwe ha, ma taa, ha bụkwa otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'agbanyeghị ụdị kọmputa anyị na-achọ.
ASUS, onye ezigbo aha ya bụ ASUSTeK Kọmputa, bụ mba dị iche iche dabere na Taipei (Taiwan) ọkachamara na ngwaike, eletrọnịkị na robotik. Ha bụ ndị na-emepụta nne nne, kaadị eserese, ngwa anya, ngwaahịa multimedia, peripherals, kọmpụta dị iche iche, ebe a na-arụ ọrụ na ụdị ngwa ndị ọzọ nwere sistemụ arụmọrụ, dị ka ekwentị mkpanaaka, na ọtụtụ ndị ọzọ.
ASUS VivoBook 15 OLED…
ASUS bụ n'etiti ndị na-ere kọmputa iri kacha elu, Na-erute ọnọdụ nke anọ na 2015. Site na trajectory a dị mkpa, na otú ọ ga-esi bụrụ ihe ọzọ, anyị na-ekwu maka onye na-emepụta ihe na-enye kọmputa ọ bụla nke anyị nwere ike iche n'echiche, site na nke kacha nta na nke nwere uche na nke kasị ukwuu na ike. N'ime ndị ọhụrụ, ma ọ bụ karịa ụdị ndị gara aga, anyị na-ahụ laptọọpụ nwere i7 processor nwere ụdị nhazi niile, mana ọ na-enwe ọnụ ahịa asọmpi mgbe niile.
Huawei bụ a ụlọ ọrụ chinese A mụrụ ya na njedebe 80s, mana ọ bụ na 2010 ka ọ malitere dị mkpa n'ezie. Ma ọ malitere ime nke a karịsịa site n'ịbanye n'ime ụwa nke smartphones, ebe ọ na-enyekarị nhọrọ dị ukwuu na ọnụ ahịa asọmpi. Mgbe e mesịrị, ụlọ ọrụ malitere ikpuchi ọzọ ahịa, na anyị nwere ike na-ama na-ahụ na ya ika ụdị nile nke smart ngwaọrụ, na ọ bụghị otú smart.
Kọmputa ha abụghị nke kacha ewu ewu, ma nke ahụ bụ n'ihi na ha erebeghị ya n'èzí obodo ha ogologo oge ahụ. Dị ka ihe ọ bụla ha na-eme, ha bụ kọmpụta nwere ezigbo ihe uru maka ego, na n'ime katalọgụ ya, anyị nwere ike ịchọta akụrụngwa bụ isi na ndị ọzọ dị elu nke anyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị na ọ na-achọsi ike.
Acer bụ ụlọ ọrụ dị na Taiwan na-arụpụta kọmpụta na akụrụngwa maka ha. Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ukwuu n'ụwa, yana ụlọ ọrụ kachasị mkpa na mba Eshia. Banyere kọmpụta ya, anyị na-arụkọ ọrụ maka akara nke na-enye akụrụngwa dị mma, nke nwere atụmatụ dị mma yana ogologo oge. N'ịrara onwe ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị ụwa nke PC, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ọ na-enye ụdị ngwá ọrụ niile, site na nke kachasị mkpa, nke gụnyere netbooks ma ọ bụ laptọọpụ 10-inch, na ndị ọzọ dị elu, dị ka ndị nwere ike iji maka egwuregwu. .
Ọ bụrụ na ihe m na-eche na Acer bụ nnọọ mmasị ika, ọ bụ n'ihi na ọ na-enye kọmputa ndị dị n'etiti n'ọnụ ahịa dị oke asọmpi, na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị ejiri ohere dị iche iche na-enye anyị na-ahụ na ụlọ ahịa pụrụ iche. Ma ọ bụrụ na ihe masịrị gị bụ laptọọpụ i7, Acer nwere akụrụngwa maka gị nkọwa na ọnụ ahịa ga-eju gị anya.
Dell bụ ụlọ ọrụ multinational dabere na Texas nke nwere ọkachamara n'ichepụta na ire kọmputa, ihe nkesa, ihe ntanetị netwọk, mmemme kọmputa, akụkụ na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ngwá electronic, yana inye nkwado nrụzi maka ha. A mụrụ ha na mmalite '80s, ọ bụkwa ụlọ ọrụ na-ewu ewu na ụwa kọmputa.
Na katalọgụ nke kọmputa anyị na-ahụ ụdị ngwá ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị ọ na-esiri ike ịchọta ndị dị ala. Ha na-enye PC dị mma nke nwere Intel i7 processor nke, ya na ihe ndị ọzọ, ha ga-ekwe ka anyị rụọ ọrụ ọ bụla, n'agbanyeghị oke arọ, mgbe niile n'ime oke. Ọ bụrụ na anyị chọkwuru ihe, ha na-enyekwa kọmpụta nwere ihe ndị dị elu karịa.
Kedu onye kwesịrị ịzụta laptọọpụ i7?
Laptọọpụ nwere ihe nrụpụta Intel i7 ọ bụghịzi maka ndị niile na-ege ntị. Nke ahụ bụ, laptọọpụ etiti nke ga-enyere anyị aka ịrụ ọtụtụ ọrụ na-enweghị nhụjuanya nke ukwuu bụ nke i5 na-eji, na i7 bụ ihe nrụpụta dị ike karị nke na-enye arụmọrụ ka mma. Ya mere, a naghị atụ aro ka ịzụta laptọọpụ i7 ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ ide ederede, sọfụ na ịntanetị na iji ngwa ọkụ. A na-atụ aro maka ndị chọrọ iji ngwa ndị ọzọ na-achọsi ike, dị ka ndị na-edezi vidiyo na ọdịyo ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ nwere ịmepụta ọdịnaya. Enwere ike iji ya na-egwu egwu na, ọ bụrụ na anyị na-ejikọta ya na ihe ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ aha na arụmọrụ dị mma
Laptọọpụ i7, dị ka anyị ga-akọwakwa ma emechaa, bụ ngwaọrụ nwere akụrụngwa dị elu karịa maka ndị ọrụ chọrọ ọsọ na arụmọrụ dị mma. Usoro ndị ahụ ga-aga ngwa ngwa na mmetụta nke mmiri mmiri na-apụ n'anya, n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ anyị na-eji. The i7 dị n'etiti i5 na i9, otú nke a bụ ihe niile-rounder ga-eme ihe niile na a ọma arụmọrụ, nke ọma n'elu i5, ma n'okpuru i9, na naanị echekwabara maka ndị kasị achọ ọrụ na-eji ngwa n'ezie. ma ọ bụ ndị na-egwu egwuregwu na-achọghị ịchụ àjà ọ bụla.
I7 ma ọ bụ i9?
N'ime 9 n'ime 10, a ga m ekwu i7. Ma mba, anaghị m ekwu na Intel i7 dị mma karịa i9; ihe m na-ekwu bụ na i9 dị ike maka ọtụtụ ojiji, yana Ọ bụghị ezigbo azụmahịa imefu karịa maka ihe anyị na-adịghị mkpa. N'ihi na ihe anyị kwesịrị iburu n'uche bụ ihe abụọ: arụmọrụ na ọnụahịa. Laptọọpụ nwere i9 ga-adịkwa ọnụ karịa naanị maka akụrụngwa a, ma ọ bụrụ na anyị achọghị ịme egwuregwu kacha sie ike na arụmọrụ kacha mma ma ọ bụ jiri mmemme na-achọsi ike, ịnwe i9 ga-adị ka ịkwọ ụgbọ ala F1 n'okporo ụzọ: kedu ihe dị mma. ọ bụ anyị ma ọ bụrụ na anyị agaghị aga ihe karịrị 120km / h? Tụkwasị na nke ahụ, i9 anaghị abịa naanị ya, ya bụ, a na-ejikọta ya na ihe ndị dị elu, nke a na-etinye na ihuenyo, na ọnụahịa ahụ nwere ike igbochi ya.
Laptọọpụ nwere i7 processor na-ere nke ọma n'oge a, ihe kpatara ya bụ, dịka anyị ga-akọwa n'isi ihe na-esote, na na-enye nguzozi kacha mma n'etiti ọnụahịa, arụmọrụ na ga-enye anyị ohere ịrụ ọrụ dị oke arọ na oge a na-anabata. N'ezie, ọ bụrụ na anyị nwere ike ibi na ihe dị nwayọọ, anyị nwere ike ịga maka i5 ma chekwaa ego.
Laptọọpụ I7 nwere 16GB nke RAM na SSD, nhazi ọkacha mmasị
Dị ka anyị kwuru, i7 laptọọpụ na-ere nke ọma n'ihi na anyị nwere ike ịchọta ha na ọnụ ahịa dị mma na arụmọrụ ya bara uru, ọ bụrụhaala na anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ntakịrị. Na, n'ozuzu, anyị nwere ike ị nweta ego mgbakwunye ahụ, nke na anyị na-ahọrọkarị, na mgbakwunye, ịgụnye diski SSD na 16GB nke RAM.
Ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị ọzọ, n'ezie, ọtụtụ ndị ọzọ, mgbe ọ bụla anyị na-ekwu maka kọmputa, a na-ebu ụzọ kpọtụrụ nkọwa atọ: processor ya, diski ike ya na ebe nchekwa RAM ya, ma ọ bụrụ na nke a bụ usoro nhazi. nhazi mmeri bụ maka ihe ndị a:
I7 processor: Ọ bụ protagonist nke isiokwu a, na nke ndị na-emepụta ihe na-achọsi ike n'ihi na ọ na-eme ka arụmọrụ nke i5 na-anabata maka ọnụahịa anyị nwere ike imeli.
16GB Ram: n'onwe ya, ọ dị m ka ọ dị ukwuu, ma ọ bụ nke ọma, ọ dị m ka m na mbụ. Sistemụ arụmọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ na 4GB nke RAM, yabụ na 8GB nke RAM anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ ọnọdụ. Mana enwere m i7 + 8GB nke RAM, mgbe ụfọdụ m na-atụ uche ntakịrị RAM, ya mere m ji kwuo ya na mbido. N'ọnọdụ m, ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka m, dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-arụ ọrụ igwe mebere (otu sistemụ arụmọrụ n'ime ọzọ). Na mgbakwunye, m na-achọpụtakwa na m dị ntakịrị na-edezi vidiyo, ya mere 16GB nke RAM bụ ihe dị mma, n'ezie na dịka mgbe niile, ọ bụrụ na anyị nwere ike imeli ya.
Disk SSD: maka ụfọdụ, agaghị m ekwu ọtụtụ, ọ bụ nnukwu echefuru. Ọtụtụ ndị anaghị eburu nke a n'uche, mana SSD na-enye ọsọ ọsọ na-agụ na ide ihe dị elu, ya mere ihe niile ga-aga ngwa ngwa, malite na mmalite nke sistemụ arụmọrụ. A na-agbakwunye ọsọ a na nke onye nrụpụta na-enye, yabụ i7 na draịva SSD, ọ na-egosi. Banyere nke a, ndụmọdụ: a ga-etinye sistemụ arụmọrụ na SSD, mgbe niile. Dịka onye ọrụ Linux, achọpụtala m na ịhapụ folda nkeonwe na akụkụ HDD nke diski ngwakọ na-emebi arụmọrụ.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ i7 dị ọnụ ala
Amazon bụ ụlọ ọrụ America dabere na Washington nke ama ama maka ịbụ otu n'ime ụlọ ahịa ịntanetị o e-azụmahịa kacha ewu ewu n'ụwa. Ọ na-enyekwa ọrụ igwe ojii ma raara onwe ya nye ọgụgụ isi, na n'ihi ya, anyị na-enweta na ọ bụ onye na-enye ọrụ na ihe nkesa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na mebere enyemaka Alexa, n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'ime ụlọ ahịa ha, anyị nwere ike ịchọta ihe niile, na-enweghị ihe ọ bụla dị ịrịba ama banyere ihe ndị ọzọ, ọ bụrụhaala na enwere ike ibupu ihe ahụ, dị ka laptọọpụ nwere i7 processor ma ọ bụ nkọwa ọ bụla ọzọ. Amazon ọ bụghị naanị na-ere Amazon, ma ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji portal gị ime ahịa gị, mana nkwa na ọnụahịa na-abụkarị ihe kacha mma anyị nwere ike ịhụ.
El Corte Inglés bụ otu nkesa na na-arụ ọrụ n'ụwa niile, ma onye mgbọrọgwụ ya dị na Spain. Ọ bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nke ụdị dị iche iche, ma ọ pụtara maka ụlọ ahịa ya ma ọ bụ ụlọ ahịa ụlọ ahịa, ndị dị na nnukwu ụlọ na, karịa ihe niile, n'obodo ndị nwere ọtụtụ ndị bi dị ka isi obodo.
Na mgbakwunye na ụlọ ahịa anụ ahụ, ha nwekwara ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe anyị ga-achọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ katalọgụ dum ọ na-enye, na n'ime ya anyị nwere ike ịzụrụ ngwaahịa uwe, otu n'ime akụkụ ya kachasị mkpa, ma ọ bụ ndị ọzọ dị ka ndị metụtara ngwá electronic. Ọ bụ na nke ikpeazụ ebe anyị ga-ahụ kọmputa dị iche iche, dị ka i7 laptọọpụ na-ewu ewu ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwá kọmputa.
Site na France, anyị nwetara Carrefour, nkesa nkesa mba dị iche iche nke afọ gara aga ka a maara dị ka Continente. Ọ bụ ezie na ọtụtụ iri afọ gara aga ọ dị naanị na nnukwu obodo, ugbu a, anyị nwere ike ịhụ Carrefour n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ mmadụ ọ bụla, ọ bụrụhaala na ọ nwere ọnụ ọgụgụ kacha nta nke ndị bi na ya na-aghọ uru maka ụlọ ọrụ ahụ.
Dabere na ụlọ ahịa ahụ, ọnọdụ ya na nha ya, na Carrefour anyị nwere ike ịhụ ngwaahịa ọ bụla, site na ndị metụtara nri, ịdị ọcha, nlekọta onwe onye ma ọ bụ ọbụna ngwa ụlọ, dị ka igwe onyonyo, igwe ịsa akwa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Anyị nwekwara ike ịhụ kọmpụta, dị ka laptọọpụ nwere i7 processor nke a na-achọsi ike taa.
PC Componenttes bụ ụlọ ahịa e-commerce nke dabere na Spain ma na-arụkwa ọrụ na Portugal. Dị ka anyị nwere ike iche n'echiche site n'aha ya, ọ bụ ụlọ ahịa nke anyị na-enwebu ike ịchọta ya akụrụngwa kọmputa, ọ bụ ezie na kemgbe ọtụtụ afọ, o tinyela ọtụtụ ihe na katalọgụ ya, dị ka igwefoto. N'aka nke ọzọ, ha akwụsịla inye ha naanị n'ịntanetị ma mepekwara ụfọdụ ụlọ ahịa anụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ i7, PC components bụ otu n'ime ụlọ ahịa ndị ị kwesịrị ịlele, ebe ọ bụ na ebe ahụ ị ga-ahụ ha na. ezigbo ọnụahịa na ụdị nhazi ọ bụla, dị ka obere RAM (ọnụahịa dị ala), nha dị iche iche, diski na, na nkenke, ị ga-achọpụta ihe ị na-achọ maka ọnụahịa nke na-esighi ike imeziwanye.
Mediamarkt bụ a yinye nke ụlọ ahịa pụrụ iche na ngwá electronic si Jamanị bịa. Ha rutere na mba ndị dị ka Spain ihe dị ka afọ iri abụọ gara aga, na site na mmalite ọ ghọrọ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ịzụta ngwá electronic maka ọnụahịa dị mma na nkwa ya. Ebumnuche ha bụ "Abụghị m onye nzuzu", ha na-ejikwa ya akọwa na anyị ga-ama ihe ma anyị zụta n'ụlọ ahịa ha n'ihi na anyị ga-enweta otu ihe ahụ na ọnụ ala dị ala.
N'ịbụ onye ọpụrụiche ya niile metụtara ngwá electronic, ọ dị mfe ịchọta ebe ahụ ụdị kọmputa niile, dị ka laptọọpụ nwere i7 processor nke a na-achọsi ugbu a. Ma ebe ha nwere nnukwu katalọgụ, anyị nwere ike ịhụ ha na nhazi ọ bụla.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ i7 dị ọnụ ala?
Black Friday bụ mmemme ịre ahịa laptọọpụ na ngwaahịa ndị ọzọ na-ewu ewu kemgbe ụwa niile. Ọ na-abịakwute anyị site na United States, a na-eme ememe ụbọchị mgbe Ekele gasịrị. N'ebe ahụ, ụbọchị ahụ bụ mgbe oge ekeresimesi na-amalite, e chepụtara Black Friday ịkpọ anyị òkù ka anyị zụta ihe mbụ anyị zụrụ maka ekeresimesi.
N'ime ụbọchị a, ma ọ bụ ụbọchị, dabere na nkwalite nke ụlọ ahịa, anyị ga-ahụ mbelata na ụdị ngwaahịa niile, na ahịa na-adịkarị mkpa. Ya mere, ọ bụrụ na anyị na-atụle ịzụrụ laptọọpụ i7, ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ọzọ, otu n'ime ụbọchị kachasị mma bụ "Black Friday".
Ụbọchị Prime bụ ihe omume ahịa, ihe dị oke mkpa, ma dị iche na ndị ọzọ. Ọ na-ekerịta ụfọdụ njirimara na ụbọchị ahịa ndị ọzọ, mana nke a bụ maka ụlọ ahịa na naanị maka otu ụdị ndị ahịa. Nke ụlọ ahịa bụ Amazon, na ụdị ndị ahịa bụ Prime, ya bụ, ndị anyị debanyere aha ma nwee ike iji ohere, dịka ọmụmaatụ, n'efu, ngwa ngwa mbupu na onyinye pụrụ iche n'oge fọdụrụ n'afọ, yana ọrụ ndị ọzọ dị ka Amazon Prime Video.
N'oge Prime Day Site na Amazon anyị ga-achọta ego na ụdị ngwaahịa ọ bụla, na ego ga-adị elu ma ọ bụ dị ala dabere na ihe ahụ, ewu ewu na ọchịchọ ya. Na mgbakwunye, e nwekwara flash amụọ, nke bụ nkeji ole na ole na ọnụahịa mara mma karịa, mana nke na-agwụ mgbe ebuka dị. Prime Day bụ ụbọchị kachasị mma ịzụta laptọọpụ i7 na Amazon, ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ọzọ ha na-enye na ụlọ ahịa e-azụmahịa a ma ama.
Cyber ​​​​Monday nwere njikọ chiri anya na Black Friday. Ha abụọ nwere otu ebumnuche n'uche, iji gbaa anyị ume ịzụrụ ekeresimesi mbụ anyị, mana a na-eme ememe Black Friday na Fraịde mgbe Ekele na Cyber ​​​​Monday gasịrị. a na-eme ya n'ụbọchị Mọnde. Na mgbakwunye, dị ka ihe ngọpụ na ịmata ọdịiche dị na Friday, n'oge Cyber ​​​​Monday anyị ga-ahụ, na tiori, naanị ngwaahịa metụtara ngwá electronic, ya mere aha Cyber.
Ma iwu eletrọnịkị na nke dị n'ụbọchị ihe omume nwere ike ịdịgasị iche, ya bụ enwere ụlọ ahịa na-esonye na mmemme abụọ ahụ ma na-enye ego ha maka izu ụka dum nke na-agwụ n'abalị Mọnde. Na-ekwu maka ihe kwesịrị ịbụ, Cyber ​​​​Monday bụ ụbọchị ka mma ịzụta laptọọpụ i7 karịa Black Friday, mana ihe kachasị mma bụ na anyị na-enyocha ihe ndị a na-enye ụbọchị abụọ ahụ iji nweta uru nke mbelata nke ga-azọpụta anyị ego.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nhazi » I7 laptọọpụ